Na-asa ahụ n'èzí ..
The Cedar na-ekpo ọkụ tubs na-mere si Western Red Cedar Osisi Clear. Nke a na ụdị osisi bụ ihe pụrụ iche n'ihi na nke iguzogide rotting. Gị eke senti Wezuga obi ụtọ na obi. The fibrous Ọdịdị ana achi achi kacha mmiri tightness na bụ otu n'ime ndị kasị mma-egbochi ihe osisi umu ke ụwa. Anyị Hot Tubs dị iche iche diameters si 4 ka 8 Ndị ahụ na- E dị ka a dị mfe na-ekpo ọkụ ma ọ bụ n'ọkwá ịsa tub na elu-arụmọrụ nkụ oven na a 'osisi Whirlpool’ na electric kpo oku, Ịhịa aka n'ahụ-jets, Iyo usoro na Izu Ike Ìhè.
Osisi Hot tub – Clear Western Red Cedar
Okpokoro ịwụ ahụ, Sawụna emikpu ọdọ mmiri ma ọ bụ Ofuro
Osisi na-ekpo ọkụ tub na electric kpo oku na ịhịa aka n'ahụ jets
(10,820 Ndị nleta na-anya a post)
10. October 2017 na 18:13
11. October 2017 na 3:28
Daalụ maka ajụjụ gị. Unser kleinstes Badefass hat einen Durchmesser von 150cm und eignet sich mit einem Aussenofen hervorragend für 2-4 Ndị mmadụ. Die Unterlagen und Preisliste haben wir Ihnen per e-Mail zugestellt.
Biko kpọọ anyị, Dị otú ahụ. 052 347 37 27. Anyị ga-enye gị ndụmọdụ.
14. August 2014 na 23:45
Ndewo ga-amasị ozi ndị ọzọ gbasara whirlpools ? Daalụ n'ọdịnihu
15. August 2014 na 17:27
Danke für Ihre Anfrage. The ọkụ tubs na whirlpool imewe nwere ọtụtụ nhọrọ, dị ka akara, Eletriki kpo oku, Ịhịa aka n'ahụ-Na Pumpe, Ozonator und Filtersystem. Ị nwere ike mere ka ị na-ahọrọ na-ekpo ọkụ tubs onwe ha ọnụ.
The akwụkwọ dị ka ụzọ ozi anyị zitere gị site na e-mail. Ọ bụ ihe kasị mma na-akpọ anyị, Dị otú ahụ 052 347 3727 ma ọ bụ na-enye anyị nọmba ekwentị gị maka callback mara.